गीतमा किन डुबे पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सविन प्रियासन ? (भिडियोसहित) – Pahilo Page
गीतमा किन डुबे पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सविन प्रियासन ? (भिडियोसहित)
१४ बैशाख २०७६, शनिबार २०:४५ 1429 पटक हेरिएको
काठमाडौं, १४ बैशाख । नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाका अध्यक्ष सविन प्रियासन साहित्यकार पनि हुन् । ८ वटाभन्दा बढी साहित्यिक कृति प्रकाशनपछि उनी गीतमा डुब्न थालेका छन् । त्यसैको प्रमाण हो, ‘म गीतहरुमा डुबेर…।’
दाङबाट प्रकाशित हुने गणतन्त्र दैनिकका सम्पादकसमेत रहेका सविन प्रियासनले बजारमा ल्याउन थालेको ‘प्रियासन’ एल्बमको पहिलो गीतको म्युजिक भिडियो युट्युवमा सार्वजनिक भएको छ ।
चर्चित युवा गायक कृष्ण काफ्लेको सुमधुर स्वरमा सजिएको ‘म गीतहरुमा डुबेर, तिमीलाई सम्झेको हुन्छु’ बोलको गीत ल्याएर प्रियासन गीत÷संगीतको दुनियाँमा पनि पदार्पण गरेका छन् । निकट भविष्यमै एल्बम निकाल्ने तयारी गरेका प्रियासनको यो गीतमा पुरुषोत्तम न्यौपानेले संगीत दिएका छन् ।
प्रियासनको पहिलो गीतको एरेन्ज गोपाल रसाइलीले गरेका छन् । यो गीत सैघाली खबरको युटुब च्यानलबाट पहिलोपटक सार्वजनिक गरिएको छ ।
आधुनिक पप गीतका रुपमा बजारमा ल्याइएको उक्त गीत खिचापोखरीस्थित तास स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएको हो । जम्मा ४ मिनेट ४५ सकेण्डको उक्त गीतमा शव्द, सँगीत, लय, भिडियो, स्वर सबै राम्रो भएकाले श्रोताहरुको मन जित्ने विश्वास प्रियासनले लिएका छन् ।
पहिलो म्युजिक भिडियोको सबै छायाङ्कन सिन्धुलीमा गरिएको हो । मोडल बेबो आचार्य र जय देवकोटाले अभिनय गरेको म्युजिक भिडियोको निर्देशन रोजल थापाले गरेका छन् । रेड क्यामेरा, ड्रोन लगायत अत्याधुनिक उपकरणहरु प्रयोग गरेर भिडियो निर्माण गरिएको गीतकार सबिन प्रियासनले जानकारी दिए ।